Etu ị ga - esi wepụta mkpọsa ihu igwe n’enweghị ọsọ ọsọ | Martech Zone
Etu aga - esi bido mebe Oku na Mgbasa Ozi N’enweghi Uzo Ozo
Thursday, January 21, 2021 Thursday, January 21, 2021 Katarzyna Banasik
Mgbe ahịa Black Friday, ịzụ ahịa Krismas, na ahịa Krismas na-aga n'ihu anyị na-ahụ onwe anyị n'oge ahịa na-agwụ ike nke afọ ọzọ - ọ bụ oyi, isi awọ, mmiri ozuzo, na snowing. Ndị mmadụ na-anọdụ ala n'ụlọ ha, karịa ịgagharị gburugburu ụlọ ahịa.
Nyocha 2010 nke onye okamuta aku na uba, Kyle B. Murray, kpughere na ikpughe na ìhè anyanwụ nwere ike ime ka ihe oriri na ọ dị mfe iji mefuo. N’otu aka ahụ, ọ bụrụ urukpuru na oyi, ohere anyị nwere imefu ego ga-ebelata. Ọzọkwa, n'ọtụtụ mba, a na-emechi ụlọ nri, ebe a na-ere nri, na ebe ịzụ ahịa n'ihi mmachi gọọmentị. Na mkpokọta, amụma ahụ adịchaghị nkwa.
Kedụ ka ị ga - esi bulie ahịa gị n'oge oyi 2021 na - acha ntụ ntụ na - agwụ ike? Otu usoro dị mma bụ, na ụbọchị ọjọọ ihu igwe, kpalie ndị na-ege gị ntị ịzụta na ozi nke ahaziri, nke gbara gburugburu. Na oge oyi, ụbọchị oyi, ịnwere ike ịmalite mkpọsa ihu igwe nke ga-enye ndị ahịa gị ihe mkpali iji kpalie ha itinyekwu ego - ihe ọ bụla site na koodu coupon, mbupu n'efu, freebie na kaadị onyinye ma ọ bụ ọbụlagodi isi iguzosi ike n'ihe nwetara mgbe etinyechara iwu. Na-ada ụda zuru oke, mana otu esi elekwasị anya naanị ndị ahịa ndị amụma ihu igwe ha na-ezute ụfọdụ ọnọdụ?
Gịnị bụ Weather Marketing
Ahịa ihu igwe (yana ahịa ihu igwe ma ọ bụ ihu igwe na-akpata ahịa) bụ akpaaka ahịa ahịa dị ike nke na-eji data ihu igwe eme ihe n'ezie iji kpalite mgbasa ozi ma hazie ozi ahịa ahịa dabere na ihu igwe mpaghara.
O nwere ike iyi ihe mgbagwoju anya ma na-ewe oge iji malite mkpọsa ihu igwe ma ọ dabara nke ọma SaaS, API-ngwọta mbụ nwere ike ịnyefe ngwa ngwa-ahịa na obere mmefu ego maka azụmaahịa obere na ọkara.
Iji nyere aka azụmaahịa n'oge oyi a, anyị, na Nyochaa, akwadebewo ihe eji eme ihe na nkuzi nke mkpọsa ahịa ihu igwe dị ala maka mmụọ nsọ. Anyị lekwasịrị anya na ndapụta nwere ike ịtọ-elu n'ime ụbọchị ole na ole ka ị ka jiri ya n'oge a. Anyị emeela nnwale ma melite ma, mgbasa ozi ụwa na nke ụwa na coupon kaadị onyinye, na-eji obere koodu, na iji usoro API mbụ. Nhazi ahụ were naanị awa ole na ole, gụnyere usoro nhazi. Naanị anyị chọrọ ịdebanye akwụkwọ mmapụta nke na-anakọta ozi ịntanetị ma kesaa geolocation nke onye ọrụ IP mana ọ bụrụ na ị nwere ụdị ụdị na igbe na nyiwe CMS gị, ị nwere ike ịhapụ usoro ahụ.
Iji melite mkpọsa ahụ, ị ​​ga-achọ nyiwe ndị a:
API Web Geolocation
Zapier <> Aeris Weather - akpaaka API
nke - Platform Ndị Ahịa
Nyochaa - Nkwalite Njikwa Software
Ụkwụ - Email Ahịa
Twilio - Ahịa ahia
Ngwaọrụ ndị a niile nwere nnwere onwe nnwere onwe dị ka nke Jenụwarị 2020, yabụ ị nwere ike ịnwale ntọala a tupu itinye aka na ndebanye aha ọ bụla.
Anyị ekepụtara ọnọdụ mkpọsa abụọ - otu maka ụlọ ọrụ mpaghara na nke ọzọ maka azụmaahịa ụwa. Nke a bụ nkọwa dị mkpirikpi nke ihe ị nwere ike ịtọ ntọala n'ime awa ole na ole site na iji ngwaọrụ ndị a kpọtụrụ aha na mbụ na usoro ị kwesịrị ịgbaso iji dozie ya:
Ihe Nlereanya 1: Berlin Café - Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Obodo
Nke a bụ mkpọsa nkwado maka ụlọ kafe na Berlin. Ná mmalite nke oge oyi, ndị ọrụ na-enweta koodu nkwado abụọ site na ozi ederede na ha nwere ike iji naanị ma ọ bụrụ na ọ na-ada (koodu izizi na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị n'elu -15 Celsius C, ọzọ ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru -15 Celsius). C). Kupọns ahụ nwere nkwarụ ma ọ bụ nwee ike kwa ụbọchị na-akpaghị aka, dabere na amụma ihu igwe maka Berlin nke anyị na-enyocha kwa ụbọchị na 7 AM site na akpaaka Zapier. Kupọns ahụ nwere ike ịgbapụta naanị otu ugboro kwa ndị ahịa.
Nke a bụ mgbalite nkwalite:
Ọ bụrụ na ọ na-ada snoo na Berlin, mee ka a -20% coupon ọha.
Ọ bụrụ na ọ bụ snowing na ọnọdụ okpomọkụ dara n'okpuru -15 Celsius C na Berlin, mee ka a -50% coupon ọha.
Ọ bụrụ na ọ bụghị snowing, gbanyụọ onyinye abụọ.
Nke a bụ usoro mgbasa ozi ga - eji:
Ndị a bụ usoro ị ga - achọ ịgbaso iji guzobe ya:
Mbubata gị ahịa isi ka Voucherify (hụ na ndị ahịa profaịlụ na-agụnye ọnọdụ na nọmba ekwentị).
Mee otu maka ndị ahịa si Berlin.
Mepụta koodu standalone abụọ -20% na -50% nwere usoro koodu ahaziri iche.
Kekọrịta koodu na ndị ahịa site na SMS site na njikọ Twilio. Ozi ozi nwere ike ịdị ka nke a:
Gaa na Zapier ma wuo njikọ na AerisWeather.
N'ime mmiri Zapier, jụọ AerisWeather ka ịlele ihu igwe na Berlin kwa ụbọchị na elekere asaa nke ụtụtụ.
Tọọ usoro ọrụ Zapier ndị a:
Ọ bụrụ na ọnọdụ ihu igwe zutere, Zapier na-eziga arịrịọ POST ka Voucherify iji mee ka ndepụta ego dị.
Ọ bụrụ na ọnọdụ ihu igwe ezuteghị, Zapier na-eziga POST arịrịọ ka Voucherify iji gbanyụọ akwụkwọ ego ahụ.
Ihe Nlereanya 2: Mgbasa Ozi Gburugburu Globalwa Maka Storelọ Ahịa Onlinentanetị - Ka Ọ Na-ada
Ebumnuche mkpọsa a maka ụlọ ọrụ ụwa niile nwere ndị ọrụ gbasaa na ebe dị iche iche. Na usoro a, ị nwere ike ịlele ndị ọrụ sitere na obodo na mba dị iche iche dabere na ọnọdụ ihu igwe mpaghara ha.
Ọ bụrụ na ọ na-ada snow, ndị ọrụ ga-enweta akwụkwọ ikike iji nweta thermos n'efu, enwere ike ịgbapụta ma ọ bụrụ na iwu ha karịrị 50 $.
Ọ bụrụ na ọ bụ snowing na ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru -15 Celsius C, ndị ọrụ ga-enweta kaadị onyinye 40 $ dị mma maka iwu dị elu karịa 100 $.
Enwere ike ịgbagha otu ugboro maka ndị ahịa.
Coupon ndaba ụbọchị asaa mgbe e bipụtara.
Onyinye kaadị onyinye maka oge mkpọsa ahụ (na nke anyị, site na 01/09/2020 ruo 31/12/2020).
Onye ọrụ njem na mkpọsa a ga-adị ka nke a:
Mgbasa ozi (dịka ọmụmaatụ, Google ma ọ bụ Facebook Ad) na-eduga na peeji nke ọdịda na ụdị iji mejupụta. Na mpempe akwụkwọ, onye ọbịa ga-eme ka ịkekọrịta ọnọdụ ma tinye adreesị ozi-e iji sonye na mkpọsa ihu igwe.
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ, na ọnọdụ ha (ihe nchọgharị nyere), n'oge a na-edejupụta ụdị ahụ, nwere ọnọdụ ihu igwe akọwapụtara na mkpọsa ahụ, ha ga-enweta coupon ma ọ bụ kaadị onyinye, n'otu n'otu.
A ga-enyefe ndị ọrụ ruru eru Kupọns ma ọ bụ kaadị onyinye site na nkesa email Braze. Kupọns / kaadị onyinye ga-eme ihe megidere iwu nke mkpọsa ahụ (site na Voucherify), naanị ndị ahịa ndị iwu ha mejupụtara tupu akara aka ga-enwe ike ịgbapụta ha.
Kedu ka ọ ga - esi rụọ ọrụ site na nyocha ọrụ aka?
Onye ọrụ na-abịa ọdịda page ma dejupụta mpempe akwụkwọ iji kesaa ozi email na ozi ala ha site na API nchọgharị.
Dị ahụ na-eziga data ndị ahịa site na webhook na Zapier:
Zapier na-eziga data na Segment.
Akụkụ na-eziga data na Braze na Voucherify.
Zapier jụrụ AerisWeather banyere ihu igwe mpaghara maka onye ọrụ, dabere na ozi geolocation. E nwere ụzọ abụọ Zapier nwere ike iso:
Ọ bụrụ na ọ bụ snowing na ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru -15 Celsius C, mgbe ahụ:
Zapier na-arịọ Voucherify iji melite onye ahịa mbụ mepụtara na metadata: isCold: ezi, isSnow: eziokwu.
Kaadị onyinye nkesa nke kaadị onyinye bụ akpaka, na-akpata mgbe onye ahịa banyere n'akụkụ dị mkpa. Ngalaba ahụ ga-akpọkọta ndị ahịa na-ezute metadata chọrọ abụọ bụCold: true NA isSnow: true.
Ọ bụrụ na ebe onye ọrụ nọ, ọ na-agba snow, na ọnọdụ okpomọkụ dị n'elu -15 Celsius C, mgbe ahụ:
Zapier na-arịọ Voucherify iji melite ndị ahịa na metadata: isCold: ụgha, isSnow: eziokwu.
Onyinye ego koodu thermos a na-ekesa na-akpaghị aka, nke mere mgbe onye ahịa batara akụkụ dị mkpa. Ngalaba ahụ ga-akpọkọta ndị ahịa na-ezute ihe metadata abụọ bụCold: ụgha NA bụSnow: eziokwu.
Nke a bụ nchịkọta nke usoro ị ga - achọ iji guzobe mkpọsa a:
Mepụta metadata ndị ahịa na Voucherify.
Wụpụta ngalaba ndị ahịa na Voucherify.
Tọọ mkpọsa abụọ - Kupọns pụrụ iche na kaadị onyinye na Voucherify.
Kwadebe nkesa na-akpaghị aka na Braze site na iji njirimara Custom Attributes.
Mepụta mpempe akwụkwọ ọdịda na ụdị iji nakọta ozi ndị ahịa na bọtịnụ iji mee ka ịkekọrịta ebe. (ebe a ị nwere ike ịchọ onye nrụpụta iji nyere gị aka ma ọ bụrụ na ịnweghị mpempe akwụkwọ na igbe gị na e-commerce / CMS).
Tọọ njikọta nkekọrịta iji nweta data na-abịa site n'ụdị ma nyefee ya na Braze na Voucherify.
Gaa na Zapier ma mepụta Zap na AerisWeather, Segment, na Voucherify ihe nkwụnye.
Nwere ike hazie usoro ahụ iji zute ihe mgbaru ọsọ azụmahịa anyị pụrụ iche. Ọsọ a dị n'elu na-akwado ịkwado ọnọdụ ihu igwe mgbe ndị ahịa mejupụtara ụdị ahụ na peeji nke ọdịda. Nwere ike igbanwe usoro a ka e nwee ike ihu igwe ihu igwe n'oge ịgbapụta ihe mkpali dị n'ụlọ ahịa gị. Na ụdị mkpọsa a, ndị ahịa niile ga-enweta onyinye ahụ mana ọ ga-aba uru naanị na ọnọdụ ihu igwe akọwapụtara. Ọ bụ gị nke na-asọpụta na-egbo mkpa gị mma.
Nkwalite abụọ ahụ dị mfe ịtọlite ​​ma jiri API-ngwọta mbụ na-enye nnwale efu. Nwere ike ịtọlite ​​onwe gị, bido maka ụbọchị ole ma ole ma hụ nsonaazụ ya, tupu ị tinye aka na ndenye aha gị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtọlite ​​ya, ịnwere ike ịgụ ntuziaka zuru oke na nseta ihuenyo na ntuziaka site na ntinye aka maka ndapụta mkpọsa abụọ Voucherify.io 200 OK akwụkwọ akụkọ.
Mgbasa ozi abụọ a bụ nanị otu ojiji nke nyiwe ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Enwere ọtụtụ nkwalite ndị ọzọ, n'ime igbe ị nwere ike iwulite site na iji ndị a na / ma ọ bụ nyiwe ndị ọzọ nke API mbụ.
Voucherify bụ API-mbụ Nkwalite Management System maka Digital Teams na-enye ike ahịa otu iji malite contextual dere, okwu Ntuziaka, ego, Onyinye Efu, na iguzosi ike n'ihe mkpọsa ngwa ngwa.
Ina malitere Voucherify
Tags: ihu igwe aerisAPIỤkwụenweghị koodugeolocationnkeTwilionyegharịaweatherahịa ihu igweihu igweike
Dijitalụ ahịa ọkachamara na onye njikwa ngwaahịa. Nwere mmasị na njikwa ngwaahịa na ahịa dijitalụ - ihe niile site na usoro ụlọ ngwanrọ, usoro njikwa ọrụ, usoro UX na usoro ahịa.
Ebe ị ga-anabata, nzukọ, kesaa, bulie ma bulie pọdkastị gị